Fampiharana fanadiovana Android tsara izay hahagaga anao | Androidsis
Androany dia tsy maintsy manao fiaiken-keloka aminao aho, ary na dia teo aza ny zava-misy fa hatramin'izao dia nanohitra ny noheverina ho foana aho Rindrambaiko fanadiovana Android Satria ny fanafody dia ratsy kokoa noho ny aretina, rehefa avy nahalala momba ny fampiharana fanadiovana Android izay hasehoko anao anio, tsy maintsy milaza aminao aho fa nanova ny saiko tanteraka aho taorian'ny nahafahako nandinika tsara an'ity fampiharana ity nandritra ny herinandro mahery. fampiasana.
Mihoatra ny fampiharana fanadiovana Android na Android Cleaner fotsiny, ity fampiharana ity dia feno multitool izay raha vantany vao fantatrao fa io dia iray amin'ireo zava-dehibe amin'ny fitaovanao. Indrindra raha manana ambaratonga ambany na mid-range ianao.
Ny fampiharana izay mamaly ny anaran'ny Systweak Android CleanerIzy io dia rindrambaiko maimaimpoana tanteraka miaraka amin'ireo doka anaty rindranasa izay tsy dia mahasosotra mihitsy, fampiharana azonao sintonina mivantana avy amin'ny Google Play Store, fivarotana fangatahana ofisialy ho an'ny Android amin'ny boaty avelako eo ambanin'ireto andalana ireto .
1 Sintomy ny Systweak Android Cleaner maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
2 Izay rehetra atolotry ny Systweak Android Cleaner anay
2.1 Mpanadio rakitra mora foana
2.2 Safidy fitahirizana
2.3 Safidy duplates
2.4 Safidy fitantanana bateria
2.5 Safidy fisie miafina
2.6 Safidy hanadiovana mifantina ireo rakitra tahirizin'ny WhatsApp
2.7 Mode hibernate
2.8 Hafainganam-pandeha maody lalao
2.9 Mpampiasa fampiharana
Sintomy ny Systweak Android Cleaner maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Madio ho an'ny Android: Booster an-tariby sy Optimizer RAM
Developer: SOFTWARE SYSTWEAK
Izay rehetra atolotry ny Systweak Android Cleaner anay
Mpanadio rakitra mora foana
Ao anatin'ny safidin'ny Ny famafazana rakitra dia manana mpanadio rakitra maloto sy haingana na ireo rakitra sisa tavela izay manimba ny Android amin'ny fotoana mandeha, indrindra raha iray amin'ireo mpampiasa ireo isika, toa ahy, izay saika tsy mamono na mamerina ny Android indray.
Tsindrio fotsiny io safidy io Rakitra tsy tiana, Hizaha ny fahatsiarovan'ny cache ivelany an'ireo rindranasa izay andehanantsika isan'andro amin'ny Android, fisie vonjimaika, fisie apk, lahatahiry tsy ampiasaina ary fisie mavesatra kokoa ny fampiharana.
Vantany vao vita ny scan ary hisorohana antsika tsy hamafa ireo rakitra izay tsy tiantsika hamafa, dia hanamarika antsika fotsiny ilay fampiharana hamafana ny cache an'ny apps ampiasaina sy ireo fisie vonjimaika amin'izay, amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra madio fotsiny izao dia afaka diovina ireo rakitra tsy ilaina ireo.
Amin'ity safidy ity Ny fampiharana dia manivana ny rakitra rehetra izay efa notehirizinay na nampiantranoinay tamin'ny Android isaky ny kilasy, filtration iray amin'ny alàlan'ny sary, mozika, horonan-tsary, antontan-taratasy, haino aman-jery WhatsApp, fisie marobe ary fisie alaina mba hahafahantsika mahita sy manafoana amin'ny fomba manual sy voafehy ireo rakitra izay heverinay fa mety.
Un finday matanjaka mitady dika mitovy avy aiza no hahitana sy hanafoanana ireo rakitra anaovana kopia izay tsy fantatra fa mibodo toerana fitahirizana anatiny sarobidy amin'ireo terminal Android-nay.
Safidy fitantanana bateria
Fitaovana iray manome antsika angona mivaingana sy marina momba ny batterie an'ny Android, data toa ny mari-pana amin'ny bateria, ny herinaratra, ny fifandraisana azontsika avela ary safidy iray mandrehitra mpamonjy bateria iray amin'ny tsindry iray fotsiny.
Safidy fisie miafina
Safidy ho an'ireo mpampiasa manam-pahaizana ahafahantsika mahazo mijery ny lahatahiry miafina an'ny Android mba hahafahanay manao fitantanana an-tanana azy ireo.
Safidy hanadiovana mifantina ireo rakitra tahirizin'ny WhatsApp
Raha mbola tsy manana ianao ny fanavaozana beta an'ny WhatsApp izay mampiditra an'io fanadiovana voafantina io amin'ireo fisie izay, miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana sy ny fampiasana ny WhatsApp dia mamela ambin-javatra ao anaty fahatsiarovana anatiny ny Android-nao, avy eo ity safidy ity dia ho tonga aminao amin'ny rendrarendra, ary izany dia amin'ny alàlan'ny fanindriana io safidinao WhatsApp io fotsiny, dia handeha isika midira amin'ny fako rehetra izay tahirizin'ny WhatsApp ao anaty lahatahiry, dia hosivanina amin'ny alàlan'ny kilasin'ny rakitra izany tena afaka manafoana izay mahaliana antsika isika nefa tsy hahafoana izay tiana hotehirizina ao amin'ny kaonty WhatsApp.
Fomba iray ahafahantsika miditra haingana amin'ireo rindranasan'ny rafitra amin'ny tsindry iray monja, apetraho amin'ny hibernate ireo fampiharana izay efa napetraka mialoha ao aminy ary tsy ampiasainay velively. Safidy mety indrindra hametrahana ireo fampiharana efa napetraka toy ny Facebook mba hibernate amin'ny fomba tena tsotra.
Hafainganam-pandeha maody lalao
Hadalana fotsiny izany amin'ny alàlan'ny Game Center an'ny Samsung miaraka amin'ny tsy fitovizany lehibe Azontsika atao ny manampy ny lalao sy ny fampiharana amin'ity vatasarihana fampiharana haingana ity. Mety ny manana boatin-drakitra faharoa ho fidirana mivantana amin'ny birao izay hihazakazahana haingana ireo rindranasa ampiasainay indrindra isan'andro raha mbola nampiditra azy ireo tamin'ny lalao SpeedUp izahay.
Amin'ity safidy ity dia ho afaka isika tantano haingana ireo rindranasa napetrakao amin'ny Android hamafana azy ireo amin'ny tsindry tsotra fotsiny.
Ity no safidy tiako indrindra amin'ny add-ons ananany Systweak Android Cleaner, ary io no fangatahana ampidirinay ato amin'ity fizarana ity navily lalana ireo fampandrenesanao tonga mba tsy hanelingelina anay Izahay dia tsy mahazo fampandrenesana eo amin'ny efijery na fampandrenesana eo amin'ny lambam-baravarana fampandrenesana, eny fa na fampitandremana re aza momba fampandrenesana vaovao voaray.
Toy ny a Ivotoerana fampandrenesana mangina izay hanangonana fampandrenesana voaray avy amin'ireo fampiharana efa voafantina teo aloha, mba tsy hanelingelina anay na oviana na oviana izy ireo, ny fanangonana azy ireo amin'ny toerana iray ihany mba hahafahantsika manontany azy ireo rehefa manam-potoana isika nefa tsy very ny fampandrenesana tonga.
Farany dia manana safidy fanamboarana ahafahana mampandeha ireo fampandrenesana momba ny fampiharana izahay, ny elanelam-potoana hanaovana fanadiovana mandeha ho azy, lisitry ny singa tsy raharahina ary ny safidy hanovana ny fiteny izay, satria tsy azo atao raha tsy izany dia tafiditra ao ny fiteny Espaniôla.
ny farany safidy amin'ny anaran'ny More ..., afeno a Safidy famahanana angona mahaliana ao amin'ny rahona hanao tahiry an-tserasera ary azontsika ampiasaina amin'ny fitaovana rehetra. Safidy iray mitaky ny fisintomana ny rindranasa tsy voatery, izay tsy nanahirana ahy akory ny manandrana azy satria miaraka amin'ny backup Google ahy dia efa manana mihoatra ny ampy aho.
Raha fintinina a fampiharana fanadiovana Android tena mahaliana izay amin'ity tranga ity raha toa ka heveriko fa fitaovana fanadiovana tena tsara satria manana safidy tena mahaliana tokoa izy toy ny fanadiovana WhatsApp, fanadiovana mandeha ho azy, fanadiovana duplicates tena mahomby ary koa safidy iray hanivanana sy hitahiry ny fampandrenesana ireo rindranasa izay heverinay fa mety ho hita amin'ny fotoana rehetra, ity Ny farany Safidy izay safidy mahasoa ahy manokana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana fanadiovana Android tsara izay hahagaga anao
Fametraham-pialana tampoka an'ny CEO Samsung